Antenimierandoholona : voafidy ho filoha Rakotomanana Honoré | NewsMada
Fombafomba fotsiny sisa… Voafidy ho filohan’ny Antenimierandoholona Rakotomanana Honoré, tamin’ny fivoriana manokan’ny Antenimierandoholona teny amin’ny lapan’Anosikely, omaly. Kandidà tokana tsy nisy mpifaninana izy, zokiolona indrindra, ary natolotra ny antokom-pitondrana maro anisa izay manana loholona 34 amin’ny 63 mandrafitra io andrimpanjakana io.
Nahazo vato 60 amin’ny 62 izy, ary nanao vato fotsy roa. Tsy tonga ny loholona iray. Mpahay lalàna ary manampahaizana manokana momba ny lalàmpanorenana ny loholona Rakotomanana Honoré, anisan’ireo 21 notendren’ny filohan’ny Repoblika. Filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha izy, ary efa filohan’ny Fitsarana vao momba ny lalàmpanorenana (HCC).
Mila miasa mafy ireo loholona
“Ny olona zatra miasa, tsy matahotra mandray andraikitra”, hoy ny filoha Rakotomanana Honoré tamin’ny kabariny. Mino izy fa vonona handray andraikitra avokoa ireo loholona. Roso ny dia amin’ny fampandrosoan an’i Madagasikara, fa tsy hoe handeha etsy sy eroa. “Miroso isika ary tsy maintsy mitazona ny fahamendrehana, izay mitaky asa, finiavana, fitiavana, fahatokisana, fanetren-tena, fahamarinana, fahavononana”, hoy izy.
Na inona na inona toerana misy ny tena ka ananana andraikitra amin-kitsim-po, miasa ho an’ny firenena: misy hatrany fanenjehana mandrivorivo sy ny fanakianana tsy marim-pototra miendrika fanaratsiana. Miantomboka amin’ny mpitondra fototra izany fanenjehana izany, ka hatrany amin’ny faratampony.
Notsiahiviny àry ny andraikitry ny loholona: misolo tena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ireo vondron-draharaha ara-toekarena sy sosialy. Manampy ny governemanta amin’ny lafiny toekarena sy sosialy koa ny loholona, ary mandrafitra ny lalàna ho amin’ny fampandrosoana. Tokony hiainga amin’ny kolontsain’ny vahoaka ny fanaovana lalàna, ka adidy ny mifanerasera amin’ny vahoaka.
Aorian’ny fifidianana mpikamban’ny birao maharitra, filoha lefitra sy kestiora roa avy ary mpampaka-teny iray, hisy ny fandinihana ny fitsipika anaty. Haroso hankatoavin’ny HCC izany, raha mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana na tsia. Vita izay, miroso ny fifidianana ireo filohan’ny vaomiera.